Reach7: Ataovy izay hahitana mpihaino marobe amin'ny tambajotra sosialy | Martech Zone
Manatratra7 te-hanamora ny fanitaran'ny tsirairay sy ny orinasa ny fifandraisan'izy ireo ara-tsosialy manerana an'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny Reach7, ireo mpampiasa dia mamantatra sy mandray anjara amin'ny mpihaino mahaliana indrindra amin'ny media sosialy mora sy mahomby.
Ny sehatra ataon'izy ireo dia manampy ny mpampiasa hanangana mpihaino mifandraika amin'ny tsenany eo an-toerana na hiasa am-pahombiazana hifandraisana amin'ny tsena manerantany. Ny orinasa na olon-tsotra dia afaka mametraka ny bitsika amin'ny fiteny 80 mahery amin'ny fiteny be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao. Ny 90% ny dikanteny dia vita ao anatin'ny adiny iray, ny ankamaroany ao anatin'ny minitra vitsy.
Fampidirana Reach7 fanampiny
Fitomboan'ny mpihaino - Mitombo amin'ny fidirana an-tsehatra kendrena. Fantaro ny olona sy ny atiny harahina, tianao ary zarao.
Laharam-pifanarahana - Mitsitsia fotoana miaraka amin'ny laharam-pahamendrehana misy anay izay mahita anao ny vokatra tsara indrindra.
Fandrefesana ny fahombiazana - Ny porofo dia ao anaty laoka. Makà antontanisa isan'andro sy isan-kerinandro momba ny vokatr'ilay fifandraisanao amin'ny mpanaraka anao vaovao.
Ampifanaraho amin'ny Twitter ny toerana misy anao - Mahazoa tsena 80 + marobe miaraka amin'ny fandikana haino aman-jery sosialy tsy misy tohatra namboarina tao.
Mpihaino Segment - Zahao ho vondrona fampielezan-kevitra ireo vondrona kendrenao mba hahafahanao mifantoka amin'ny vondrona samihafa amin'ny andro samihafa.
Research - Jereo ny dian-tserasera feno an'ny olona mifandraika rehetra toa ny LinkedIn, bilaoginy, Pinterest sns.
Andramo Reach7 Maimaimpoana
Reach7 koa dia mananaHootsuite Plugin, mba hahafahanao mampiasa azy mivantana avy amin'ny anaoHootsuite tabilao handaminana sy hamoahana ireo sioka.
Reach7 dia manolotra drafitra telo:
Ny drafitra Starter, serivisy maimaimpoana izay tonga lafatra ho an'ny olona maniry hampitombo ny fifandraisan'izy ireo amin'ny media sosialy.
Ny drafitra feno, $ 19.99 / volana, dia mety amin'ny orinasa, orinasa e-varotra, ary departemanta fivarotana mila manao mpijery kendrena amin'ny media sosialy.
Farany, ny drafitra Pro amin'ny $ 59.99 / volana dia tsara indrindra ho an'ny orinasa misy ampahan'ny mpampiasa marobe amin'ny tsena mihoatra ny iray, ary koa ireo mpikarama sy maso ivoho kely.
Reach7 dia manana mpanjifa mihoatra ny 5,000, isa mitombo isan'andro ary misy orinasa toa Worldpay, Re / Max, Sharp, ary Viking Direct.
Tags: plugin hootsuitefandikan-tenin'olombelonafanatontoloanamulti-tenyfiteny maromahatratra7haino aman-jery sosialyfifandraisan'ny media sosialyfandikan-tenybitsikaTwitterlocalisation twitter
Ny zavatra inoan'ireo mpivarotra dia ireo fahombiazana 3 voalohany nalaina